I-Múlafossur Cottage ngempophoma emangalisayo - I-Airbnb
I-Múlafossur Cottage ngempophoma emangalisayo
Gásadalur, i-Faroe Islands
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Jákup Suni
U-Jákup Suni Ungumbungazi ovelele
I-'Lundasmáttan' ingenye ye-'Múlafossur Cottages' etholakala eduze kwempophoma edume umhlaba wonke edolobhaneni i-Gásadalur e-Faroe Islands. Kuwuhambo lwemizuzu eyi-10-20 kuphela ukusuka esikhumulweni sezindiza okuwukuphela kwayo eziqhingini, izitolo nezindawo zokudlela ezinhle kanye nezinye zezindawo ezimangalisa kakhulu zaseFaraese njengeDrangarnir, iTindhólmur kanye nechibi iSørvágsvatn/Leitisvatn. Sithembisa indawo enomlingo ngempela futhi eseceleni, enezindawo zokubuka izimvu, izinyoni nezinkomo zasezintabeni - zonke ezibekwe eduze komfula oholela ezansi empophomeni.
Iminyaka eminingi thina - uMndeni wakwaLauritsen - siphuphe ngokuba nomphakathi omncane wezindlu zangasese zamapulangwe ezibukeka ngokwesiko - indawo yabantu yokuphumula futhi bajabulele indawo enhle yase-Gásadalur. Njengamanje sinezindlu ezimbili esingaziqasha: 'Tjaldurssmáttan' kanye 'neLundasmáttan' akhiwa ngo-2020 inkampani ephethwe wumndeni: Foss.fo.
Ngenkathi izakhiwo zincane futhi zithokomele zihlala ngokunethezeka kufikela kubantu abane - ngenketho yokusethela umuntu owengeziwe nge-200DKK eyengeziwe. Kukhona umbhede ophindwe kabili ekamelweni elingaphansi, futhi igumbi eliphezulu eliphezulu linemibhede emi-2. Qaphela ukuthi udinga ukugibela iladi/izitebhisi ukuze ukhuphukele phezulu njengoba kukhonjisiwe ezithombeni.
Iyindawo yawo wonke umuntu ngempela: imindeni enezingane ezifuna ukudlala emfuleni nasezindaweni ezizungezile ezinobungane, imibhangqwana efuna ukuphumula nokuchitha isikhathi esiseqophelweni eliphezulu ndawonye nabahambi abafuna ukugibela intaba nokuhlola.
Edilini lephakheji kukhona i-wifi, amashidi ombhede, amathawula nezinto ezibalulekile zasekhishini nezokugezela. Ngeshwa akukabi khona umshini wokomisa iwasha emagcekeni. Sicela ukubhukha okungenani ubusuku obubili. Ekugcineni, kunenkokhelo yokuhlanza engu-500DKK phezu kwesamba semali.
Ibungazwe ngu-Jákup Suni
Sonke sihlala e-Sørvágur okuyindawo eyi-15min kuphela ukusuka lapho futhi sihlala sijabulele ukusiza uma kukhona okudingayo, noma ukuphendula noma imiphi imibuzo ongase ube nayo. Buza!
UJákup Suni Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Gásadalur namaphethelo